Accelerating Medical Product Development / Createproto - Mepụta Techproto Tech Co., Ltd.
NDlọ ọrụ / Ahụike
Inweta ihe ohuru nke Medical Medical
Ọsọ ọsọ na ịga nke ọma nke usoro ọgwụgwọ bụ ihe dị mkpa maka azụmaahịa azụmaahịa nke ngwaahịa ọgwụ. Nlekọta ahụike nke ahụike bụ ihe dị mkpa maka usoro ngwaahịa ahụike na usoro mmepe gị. Nwere ike nweta ha n'ime ụlọ nyocha ma ọ bụ na-adakarị ọnwụnwa na n'ikpeazụ n'ahịa mee elu mee.
Mepụta CreateProto na-enye ọtụtụ usoro ngwangwa ngwangwa na ntinye ihe nrụpụta maka ụlọ ọrụ ahụike. Site na ngwa ndị ejiri aka rụọ ọrụ na nnukwu ọgwụgwọ, anyị na-enye ọrụ zuru oke nke ọrụ ahụike na-arụ ọrụ sitere na nkwado ụdị nnabata na nnwale ụdịrị arụmọrụ na -emepụta obere nrụpụta na-agba ọsọ na ọnụ ahịa dị ngwa na ngwa ngwa.
Otu n'ime ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ọrụ ahụike nke ụwa na-echigharịkwuru CreateProto iji kpọghee elele nke usoro imepụta dijitalụ. Site na ngwaọrụ ndị ejikọtara na ịkọwapụta nke ngwaahịa ahụike, nrụpụta dijitalụ na-eme ka mmepe na iwebata ahịa na-aga n'ihu site na ịmalite ngwa ngwa, ngwa ngwa akwa, na nrụpụta dị ala.
Kedu ihe kpatara ieslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwaọrụ Ọgwụ na-eji CreateProto?
Nyocha mmekọrịta gbasara mmekọrịta
Mee mgbanwe mgbanwe dị oke egwu nke na-echekwa oge mmepe na ọnụ ahịa ya na imepụta nrụpụta (DFM) na ntinye ọ bụla.
Nweta akụkụ dị ala na-emepụta ngwa ngwa dị ka ụbọchị 1 iji mee ka usoro ntinye gị dị otu oge tupu emechara ngwaahịa na ahịa.
Bridge Tooling Tupu Production
Nwepu ngwa ngwa ngwa ngwa maka imepụta na nkwado ahịa tupu itinye ego na ngwaọrụ.
Họrọ site na plastik dị elu, roba silicone ahụike, na 3D-e biri ebi micro-mkpebi na microfluidic akụkụ, n'etiti narị ndị ọzọ plastic, metal, na elastomeric ihe.
Teknụzụ amaghị ihe
Multiple n'ichepụta teknụzụ gafee ọrụ anọ pụtara akụkụ gị jikọtara ya na ezigbo akụrụngwa na usoro n'agbanyeghị ọrụ gị chọrọ.
Mepụta ihe eji eme ihe na ihe eji emepụta ihe maka arụ ọrụ yana usoro nyocha, ma ọ bụ ụdị ụdị 3D na ngwa nyocha iji hụchalụ tupu usoro ahụike.
Inkpụzi ọgwụ na ọgwụ
Injectionkpụzi ngwa ngwa na ịkpụzi na-enye nhọrọ ka mma maka ndị na-emepụta ngwaọrụ ahụike nke chọrọ akụkụ kpụ ọkụ n'ọnụ dị ala. Ọ ga-egbo mkpa gị maka ịmepụta ihe nrụpụta, nyocha injinia, nyocha ahụike, ngosipụta nke ndị na-etinye ego ma ọ bụ ịdị njikere maka mmepe nke ahụike na ahụike ngwaahịa. N'otu oge ahụ, ọ ga-enwe ike idozi ọdịiche dị n'etiti prototype na mmepụta, ma hapụ okwu ọ bụla ka a chọpụta ma mezie nke ọma tupu ha ebutefee n'ichepụta ihe.
Mee ngwangwa mmepe nke FDA Class I na II ngwaọrụ, ma ọ bụ ndị na-abụghị akụrụngwa akụrụngwa, na anyị ọgwụ ọgwụ ịkpụzi ike, nke na-agụnye ígwè tooling, ọcha ụlọ, na ISO 13485 àgwà asambodo.
Ihe Obibi 3D Na-eme Innovation na Ahụike Ahụike
Site na mbipụta 3D, ngwa ngwa ngwa ngwa na mgbakwunye teknụzụ na-aga n'ihu site na mmali na oke, na -emepụta ohere dị egwu na eziokwu maka ụlọ ọrụ ahụike. 3D ebi akwụkwọ bụ mmako layering usoro na-enye ohere onye ọ bụla mmiri na-emepụta ngwa ngwa. Usoro ngwa ngwa a na-enye ohere iji ngwa ngwa ma dị ọnụ ala iterations maka imepụta mmezi nke ọma. Ihe kachasị mma mbipụta 3D na-enye bụ ụdị ziri ezi na nnwale kwesịrị ekwesị ka usoro nrụpụta nke teknụzụ mgbakwunye nwere ike mepụta ụdị na ogo nke akụkụ ahụ achọrọ, na-eme ka ọ baa ezigbo uru maka nyocha oge mbụ nke akụkụ ahụike ọhụrụ.
CreateProto na-enye ọtụtụ ọrụ mbipụta 3D gụnyere Stereolithography (SLA) na Selective Laser Sintering (SLS), ụzọ dị mma iji mee ka usoro mmepe ngwaahịa gị dị ngwa. Site na a CAD imewe ka akụkụ anụ ahụ na aka gị na n'ikpeazụ n'ihu gị otu, ọ bụ ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla. Anyị nwere ndị ọrụ zuru ezu nke ndị injinia raara onwe ha nye na ndị njikwa ọrụ nke ga-arụ ọrụ na gị iji nyochaa atụmatụ gị, ọdịdị na ọrụ gị, na-enyere ndị nwere ike itinye ego na ndị ahịa aka iji anya nke uche hụ ngwaahịa ahụ n'aka iji duzie itinye ego na ngwaahịa ahụ tupu ya aga ahịa.
CNC nkenke machining maka Medical Ngwaọrụ na Parts
Ikekwe ọ dịghị teknụzụ ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa na nkenke dị elu, nhazi nnabata dị elu dị ka igwe CNC. Createproto bụ ọkachamara na ọrụ ntinye ụdị ọrụ CNC na ụlọ ọrụ ahụike, na-elekwasị anya na ụdị imepụta ihe ngosi dị oke mma na njikwa injinia na-arụ ọrụ zuru oke. Site na 3 CNC axis maka akụkụ ahụike dị mfe ma ọ bụ obere ọsọ, na-agbanwe nhazi 5-axis maka nkenke akụrụngwa ọgwụ, ikike nhazi ndị a na-enyere ndị otu aka ịgba ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa igwe na igwe na arụmọrụ.
Tupu ịkwaga na mbipụta 3D na ngalaba ahụike, n'okpuru bụ uru nke igwe CNC, yana mgbe ọ kacha baa uru:
Nhọrọ dịgasị iche iche nke ihe onwunwe, gụnyere plastik mmepụta na ọla dị iche iche.
Ukwuu ziri ezi, repeatable, na magburu onwe ya elu na nkọwa.
Fast turnaround, CNC machining nwere ike na-agba ọsọ nọgidere maka 24 awa ozugbo ntọlite ​​na dechara.
Omenala mmiri n'ichepụta maka ọgwụ machining ọrụ, scalable mpịakọta si otu 100,000.
Urethane Nkedo maka Innovation pere mpe na Ngwaahịa Ahụike
Ọtụtụ ohere na ngwa na-eme polyurethane nkedo ihe mgbakwunye na-adọrọ adọrọ na ụlọ ọrụ ahụike. Nwere ike iji ọgbụgba urethane maka mbupute ngwaahịa izizi tupu ịkpụzi ya na ngwa ọrụ maka nyocha ahịa na nzaghachi ndị ahịa, yana ịbịanye ngwa ngwa ngwa ngwa. Maka ahịa ebe obere ihe ọhụụ bụ ụkpụrụ na ndụ ngwaahịa dị mkpụmkpụ, ịkpụzi silicone iji mee urethane na-enyekwa ndị nrụpụta ohere imeziwanye atụmatụ ha na ọsọ ọsọ na-enweghị itinye ọnụ ahịa nke ngwa ọrụ siri ike.
Ndi okacha amara nke CreateProto na enye oru nleba anya nke oma nke ndi nleba anya na oria plastik, ma na enyere gi aka imeri ihe di nma n’etiti ogo di nma, ihe ndi ozo na oge ndu. Nke a sụgharịrị n'ime oge na ịchekwa ego maka ndị ahịa na-achọ ịsọ mpi ihu n'ihu n'ọdịdị dabara adaba na nnwale ọrụ, azụmaahịa mbụ, ma ọ bụ ọbụlagodi mmepụta obere olu.
Kedu Akụrụngwa Na-arụ Ọrụ Kachasị Mma maka Ngwa Ahụike?
Akwa-mmiri Plastics. PEEK na PEI (Ultem) na-enye nguzogide okpomoku dị elu, nguzogide na-arị arị, ma ha dabara maka ngwa ndị chọrọ ịga ụlọ.
Medical-ọkwa Silicone Rubber.Dow Corning's QP1-250 nwere ezigbo okpomọkụ, kemịkal, na nguzo ọkụ. Ọ dịkwa kwekọrọ na bio-dakọtara enwere ike iji ya mee ihe na ngwa chọrọ kọntaktị anụ ahụ.
Carbon RPU na FPU. Carbon DLS na-eji ihe siri ike na nke polyurethane siri ike iji wuo akụkụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma maka mbido ngwa ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ eji eme ihe.
Microfluidics. Mmiri mmiri (ABS-like) na Accura 60 (PC-like) bụ ihe doro anya enwere ike iji maka akụkụ microfluidic yana uzo dị ka lenses na housings.
Ngwakọta Ahụike.N'etiti ígwè na 3D-ebipụtara ọla na mpempe akwụkwọ, enwere ihe karịrị 20 nhọrọ ngwongwo ọla maka usoro ọgwụ, ngwa ọrụ, na ngwa ndị ọzọ. Ngwongwo dika titanium na Inconel nwere ihe ndi di ka iguzogide onodu oku ebe otutu ihe nchara nchara na-eweta mmegha na ike.
Ngwa ịwa ahụ
Clolọ na ụlọ
Ihe Ndị Ekike
"Emeela ya n'ime atụmatụ anyị na usoro R&D anyị ugbu a ... Ọ dịịrị m mfe ịtụ maka ebu maka akụkụ maka ngwaọrụ ọgwụ (site na CreateProto) karịa ka m ga-akwụ ụgwọ ego m na ntanetị."
- Tom, Smith, Onye isi okike
CNC Prototyping, Otito Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Rapid Prototyping, Fast Prototyping,